ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံမဲ့မဖြစ်စေလိုသဖြင့် လက်ခံထားရဟု ဦးခင်ရီပြော | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာများကို နိုင်ငံမဲ့မဖြစ်စေလိုသဖြင့် လက်ခံထားရဟု ဦးခင်ရီပြော
မေစစ်ပိုင်| February 7, 2013 |
ရိုဟင်ဂျာများသည် နိုင်ငံသား မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံမဲ့မဖြစ်စေလို သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ခွင့် ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြန် လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဦးခင်ရီက အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
“လူတယောက်က နိုင်ငံမဲ့ ဖြစ်လို့တော့မရဘူးလေ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ မြေပေါ်မှာ နေထိုင်ခွင့်တော့ ရှိရမှာပေါ့။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေးသာ အဓိကကျတာပါ” ဟု ဝန်ကြီး က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားသည့် အထောက်အထားများ မှန်ကန်ပါက နိုင်ငံသား မဟုတ်သော်လည်း နေထိုင်ခွင့် ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ္တ ခိုလှုံခွင့် ပေးထားခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အတည်တကျ နေထိုင်ခွင့် ပေးထားခြင်းမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
နယ်စပ်မှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဇန်နဝါရီ လဆန်းပိုင်းတွင် ခိုးဝင်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာပေါင်း ၈၅၀ ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျွန်းစုများတွင် ပုန်းခိုခြင်း၊ ယင်းမှတဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်ခြမ်းမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ခိုးဝင်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ ၁၉၇ ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များက ဖမ်း ဆီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကော့စ်ဘာဇားမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် ၁၇ BGB တပ်ရင်းမှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မူဟာမက် ခါလက်ကူ ဂျမန်း၏ ပြောကြား ချက်ကို ကိုးကား၍ ကော့စ်ဘာဇား သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် – မြန်မာ နယ်စပ်မှတဆင့် လှေများဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ထိုင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများသို့ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပြီး တဘက် နိုင်ငံများ၏ သက်ဆိုင်ရာများက ဖမ်းဆီးကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
Credit to :ဧရာဝတီ
This entry was posted on February 7, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← “အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် တောင်ကိုရီးယားအထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံဆောက်မည်”
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ရီ မြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံ →